२0७४ श्रावण ९ सोमबार | ०६:१८:३० Toggle navigation home
प्रवासबाटै संगितमा निशानेपाल तरुण दल महाधिवेशन : 'खड्काले रन्किदै भने मेरो टिम यो हो'सिटी एक्सप्रेस कहिले पर्छ छानबिनमा ? यस्ता छन् मालिकका कर्तुतलोक गित सुन्दा सुन्दै खानै विर्सिन्थे - तिर्थहारको झोंक फेर्दै पौडेल ! पाँच हजार झण्डा र तीन हजार प्रतिवेदन पोखरामायसो गरे कसो होला ? ५४अर्व नतिरे एनसेलको सेवा बहिष्कार !सगरमाथा यातयातले ल्यायो छुटमा अशोक लेलैण्डका बसहरुगायक एबं मोडल बिशुले ल्याए सुटुक्क थाहैनपाई सजाए छुदसैंअघि नै केन्द्रीय समितिले पूर्णता पाउनेसेनामा नयाँ चलखेल दसैंअघि नै केन्द्रीय समितिले पूर्णता पाउने
मनोनीत गर्नुपर्ने २१ जना केन्द्रीय सदस्यमध्ये सभापति देउवाले यसअघि १२ जनाको मनोनयन गरिसक्नुभएको छ । अब नौजनाको मनोनयन दसैंअघि नै गर्ने तयारी रहेको समाचार स्रोतले जनाएको छ ।
स्रोतका अनुसार पार्टीको गत महाधिवेशन र संसदीय दलको निर्वाचनमा प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्दागर्दै पनि मन्त्री बन्ने अवसर नपाएका नेताहरूलाई केन्द्रीय सदस्यमा मनोनयन गर्ने सम्भावना देखिएको छ ।
मन्त्रिपरिषद्मा जस्तै ३३ प्रतिशत रामचन्द्र पौडेल पक्षलाई दिने वा नदिने भन्ने निक्र्योल भइसकेको छैन । कृष्णप्रसाद सिटौला पक्षले तीनजना मनोनीत केन्द्रीय सदस्य पाइसकेको छ ।
पुष्पा भुसाललाई सहमहामन्त्री या संसदीय समितिको सदस्य बनाउनुपर्ने नेता खुमबहादुर खड्काको माग छ । तर सभापति देउवा भागबन्डाको राजनीतिको पक्षमा अब हुनुहुन्न । त्यसैले विमलेन्द्र निधि र गोपालमान श्रेष्ठमध्ये एकजनालाई उपसभापति बनाइने निश्चित जस्तै रहेको समाचार स्रोतले जनाएको छ ।
निधिले उपप्रधानमन्त्री बन्ने अवसर पाएका कारण पार्टीको उपसभापतिको अवसर आफूलाई आउने कुरामा श्रेष्ठ ढुक्क देखिनुभएको छ । तर अर्को पार्टीको प्रधानमन्त्री रहेको अवस्थामा उपसभापतिले नै पार्टीको तर्फबाट सरकारको नेतृत्व गर्ने संसदीय प्रचलन रहेको कारण आफूले नै उपसभापति पद पाउने कुरामा निधि पनि ढुक्क देखिनुभएको छ ।
महामन्त्री पदमा भने खासै ठूलो समस्या देखिएको छैन । महामन्त्री पदका लागि ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, डा.प्रकाशशरण महत र बालकृष्ण खाँण आकांक्षी देखिनुभएको छ । तर यी तीनजनामध्ये कार्कीले अहिलेसम्म खासै अवसर पाउनुभएको छैन । कार्कीलाई महामन्त्री बनाउँदा डा.महत र खाँणको पनि खासै आपत्ति नहुने अवस्था देखिएको छ । महामन्त्री पदका लागि कार्कीको लगभग निश्चित जस्तै भएको पार्टी सभापति निकट स्रोतले जनाएको छ ।
नेपाली कांग्रेसको अहिलेको मूलधारको राजनीतिमा पार्टी सभापति देउवापछि रामचन्द्र पौडेल, खुमबहादुर खड्का र गोपालमान श्रेष्ठलाई छाडेर मूल्यांकन गर्दा विमलेन्द्र निधिपछि कार्की सिनियर मानिनुहुन्छ । तर सहमहामन्त्री को हुने ? भन्ने निक्र्योल नभएसम्म कार्की महामन्त्री बन्ने निश्चित नभएको दाबी पनि समाचार स्रोतको छ । महामन्त्री पद भनेको कर्मचारी जस्तै खटिनुपर्ने पद पनि हो ।
निर्वाचित महामन्त्री शशांक कोइराला सक्रिय नभएका कारण पनि महामन्त्री या सहमहामन्त्री मनोनीत गर्दा अन्य कुरामा पनि ध्यान दिनुपर्ने सुझाव सभापति देउवालाई धेरैले दिएका छन् । विगतमा प्रकाशमान सिंह महामन्त्री निर्वाचित भए पनि पार्टीका अन्य काम गर्न सक्षम नभएकाले कृष्णप्रसाद सिटौलालाई महामन्त्री बनाएर सभापति सुशील कोइरालाले अन्य काम अघि बढाएका थिए । यतिबेला शशांक कोइरालाको क्षमता पनि प्रकाशमानको जस्तै हो ।
त्यसैले फरक क्षमता भएकालाई महामन्त्री या सहमहामन्त्री बनाउनुपर्ने सुझाव आएको हो । सहमहामन्त्रीमा डा.महत तयार हुनुभयो भने कार्की महामन्त्री बन्ने निश्चित जस्तै छ । यता, विगतको नजिर कोट्याउँदै रामचन्द्र पौडेल पक्षले सहमहामन्त्री दाबी गरेको छ । यसका लागि बलबहादुर केसीलाई सो समूहले अघि सारेको छ । तर यसपटक पौडेल पक्षले दुईजना पदाधिकारी जितेका कारण सहमहामन्त्री पाउने सम्भावना छैन ।
सभापति देउवा भ्रातृसंगठनको महाधिवेशन गर्न र पार्टी केन्द्रीय कार्यालय व्यवस्थित बनाउन जुटेका कारण पार्टी संगठनले पूर्णता पाउन केही ढिलाइ भएको हो । धेरै विवादमा रहेका भ्रातृसंस्थामध्ये नेविसंघको महाधिवेशन सम्पन्न भइसकेको छ । तरुण दल र महिला संघको महाधिवेशन पनि सम्पन्न हुने चरणमा छ । पार्टी केन्द्रीय कार्यालय पनि निकै व्यवस्थित बनिसकेको छ ।
नेपाली कांग्रेस संसद्को सबैभन्दा ठूलो पार्टी हुँदाहुँदै पनि निकै ठूलो षड्यन्त्र गरेर राज्यका सबै पदबाट नेपाली कांग्रेसलाई वञ्चित गरिएको थियो । जसका कारण संविधान कार्यान्वयन र शान्ति प्रक्रिया ओझेलमा परेको थियो । तर सभापति देउवाले कुशलतापूर्वक नेपाली कांग्रेसलाई पहिलेकै अवस्थामा ल्याउनुभएको छ । सम्मानजनक स्थानसहित नेपाली कांग्रेस सरकारमा सामेल भएको छ ।
अब केही महिनाभित्रै नेपाली कांग्रेसले सरकारको नेतृत्व पाउने सुनिश्चित भएको छ । साथै, शन्ति प्रक्रियाको अधुरो काम फेरि सुचारु भएको छ । नेपाली कांग्रेसलाई निषेध गरेर शान्ति प्रक्रिया अवरुद्ध गर्ने ठूलो षड्यन्त्रलाई चिरेर नेपाली कांग्रेसलाई पहिलेको जस्तै भूमिकामा पु¥याउन सक्नु सभापति देउवाको मुख्य सफलता हो । @ तरुण साप्ताहिक अन्य समाचार
एनसेलको लूटमाथि टावर फोर्ने देखि सेवा बहिष्कार गर्ने कता हराए ?कांग्रेसको नेतृतवमा देउवा की निधि ?देउवाको हातमा केसीको जीवन !गायक तिवारी भन्छन्,'बाचुन्जेल सांगीतिक छेत्रमा हिडिरहनेछु'संगीतमा रमाउदैँ हेमन्त !प्राण रहुन्जेल गीत संगीतमा जम्ने प्रणगृहमन्त्री ज्यू, कहिले एक्सन चाल्ने ?'उपसभापति भारतले मानेन भन्न लाज लाग्दैन्' ? ,सभापति देउवाज्यू !प्रवास भनेर काहाँ भो र ? गीत संगीत बिर्सन सकिदैन-सर्जक रत्न बुढाप्रवासबाटै संगितमा निशानेपाल तरुण दल महाधिवेशन : 'खड्काले रन्किदै भने मेरो टिम यो हो'सिटी एक्सप्रेस कहिले पर्छ छानबिनमा ? यस्ता छन् मालिकका कर्तुतलोक गित सुन्दा सुन्दै खानै विर्सिन्थे - तिर्थहारको झोंक फेर्दै पौडेल ! पाँच हजार झण्डा र तीन हजार प्रतिवेदन पोखरामायसो गरे कसो होला ? ५४अर्व नतिरे एनसेलको सेवा बहिष्कार !सगरमाथा यातयातले ल्यायो छुटमा अशोक लेलैण्डका बसहरुएनसेल प्रकरण, करोड खुवाएर अर्ब लुट्न चलखेलराजश्वका डिजी चुडामणि शर्माको उत्पात कहिले सम्म हो ?गायक एबं मोडल बिशुले ल्याए सुटुक्क थाहैनपाई सजाए छुएनसेल प्रकरणमा : ओली, देउवा परिवार र प्रचण्ड परिवारलाई पनि प्रलोभन देखाउँदै आचार्य दाजुभाइप्रशासन र बलियो नियामक नहुँदा एनसेलको राजएनसेल प्रकरण: राजस्व विभागले ठोस जवाफ नदिए पछि सीआईपी सम्मान रोकियोसेनामा नयाँ चलखेलगीत बिमोचनसगैँ यसकारण दङ्ग हट मोडल !एनसेलले ब्रान्डिङ सुरु गरे पनि कर विवाद झन बल्झदैगल्ती लुकाउन बाबुछोरालाई खोरमा !सेनामा नयाँ चलखेलआईजीपीको लागि अहिले देखि यस्तो दौड !प्रहरीमा सरुवाको दौड‘‘हलो हट्काएर गोरु चुट्ने काम एमालेले ... - काँग्रेसका नेता रामहरि खतिवडानेबिसघको नसकिँदै तरुणका नेता यस्तो रन्कोमाप्रभाबशाली नेता खड्का स्वदेश फिर्ता , विमानस्थलमा भव्य स्वागत featured video